SomaliTalk.com » Islaamiyiinta dalka Soomaaliya oo laga miirey baarlamaanka cusub halka cilmaaniyiintu ay heleen 90% xubnaha baarlamaanka cusub
Baarlamaankan cusub ayaa waxaa ay xubnihiisu u badan yihiin 90% qurbo joog ku adag mabda’a cilmaaniyadda oo qaba in aad looga fogeeyo dadka fahamka islaamka qaba talada dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale waxaa laga yaabaa in Soomaaliya uu ka biloowdo dhaqdhaqaaq nabadeed oo ay ku mideysan yihiin islaamiyiinta dalka Soomaaliya iyagoo ku raadinaayo hab nabadeed isla markaana ka faa’iideysanaaya dimoqraadiyadda la filayo inay ka hana qaado dalka Soomaaliya marka laga baxo xilliga ku meelgaarka sida uu qoraayo dastuurka federaaliga ee ay Soomaaliya qaadatay waqtigaan xaadirka ah.
3 Jawaabood " Islaamiyiinta dalka Soomaaliya oo laga miirey baarlamaanka cusub halka cilmaaniyiintu ay heleen 90% xubnaha baarlamaanka cusub "
Thursday, August 23, 2012 at 3:11 pm
Walaalayaal kuwanow, Nuradini iyo Wadad yare, sabura, wax dhashaa dhiman. Suga, waa intaasoo Sa’cu Mataano Geela dhalaaye. mataanuhu waa
1-Hiil Qaran oo talada hanta
2- Bacdal 4 sano oo nin walba codkiisa mariyo meeshuu rabo
fursad siiya fadlan, deg-deg waan eednay haddaan nahay Soomaali.
Nuradini PenFriend says:
Tuesday, August 21, 2012 at 7:37 am
Asc – Maqaalkan qofka qorey waxaan u malaynaayaa inuu arimaha somaliya si fiican ula socdo website kan somalitalk.com waa website dhexdhexaad ah soona bandhiga arimaha islaamka waad ku mahadsan tihiin.
Wadaad yare sxb adiga dee waxaa wanaagsan inaad kala fahanto islaami iyo cilmaani ,,,,,,,,,,,,, anigu islaami ayaan ahay ee adiguna ma tahay , hadii ay haa tahay kelimada cilmaani si wanaagsan u faham , Khayrna hel insha Allah
Wuu iga yaabiyey maqaalkaani.Muxuu yahey islaamiyiinta programkooda siyaasadeed oo ay dadka kale oo soomaalidaa uga geddisanyihiin oon ka aheyn sheegasho wax dadka dhan ka wada dhaxeeya oo ah diinta Islaamka? Sheegasho iyo wax caam ah in la isi siiyo gooni looguma yeesho. Haddaad hawada la neefsado iyo ileyska qorraxda tiraahdo anigaa kaligey leh sidaas kuma yeelaneysid.
Maxey islaamiyiintu uga geddisanyihiin dadka calmaaniyiinta aad ku sheegtey?
Islaamiyiinta dowladnimada iyo dastuurka oggol waa meel
Meel kalena waxaa taagan kuwo middiyo wata oo aan baarlamaanba rabinoo gaalnimo u arka.
Kuwo dowladnimada oggol waxaa ka mid ah Sh. Shariif iyo Aala Sheekh iyo Islaax iyo Itixaadkii hore oo haddaba dowladaan ku jira.
Kuwa middiyaha wata xagga iska dhige kuwaan danbe maxey joogistooda iyo maqnaashahoodu islaamka kusoo korshisey ama ka dhintey? Waa waxba
Markey sidaas tahey waxaa kaliya oo harey waa iney faction siyaasadeed oo awood qeybsiga qeybtooda ka raba iney noqdaan. Taasna waxey kala mid yihiin qabqableyaashii hore iyo kooxihii kaalintooda soo qaatey oo hadda gadaal la mariyey. Kama fadli badna Caato iyo Xaaraan ku Naax.